ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ | GISON MACHINERY CO., LTD.
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ - Gison Machinery Co., Ltd.
ပိုမိုကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့အား ကူညီပေးပါ။
ပေးထားသော အချက်အလက်များသည် သင့်အတွက် အသုံးဝင်ကြောင်းနှင့် သင်မကြာခဏ ပြန်လိုလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ GISONသင်၏ထည့်သွင်းမှုကိုတန်ဖိုးထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်ချက်စနစ်မှတစ်ဆင့် သင့်မှတ်ချက်များကို ကြိုဆိုပါသည်။ gison@seed.net.tw , sales@gison.com
သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား မေးလ်မှတဆင့် သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်း/ဖက်စ်ဖြင့်လည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
လိပ်စာ- No.6, Alley 105, Lane 68, Sec. 2, Sinan Road, Wurih, Taichung 41466, Taiwan
TAIWAN Traders/Distributors ကျေးဇူးပြု၍ #206 Miss Tina Chen ကို ဆက်သွယ်ပါ။
အီးမေးလ်- gison@seed.net.tw , sales@gison.com
ပိတ်ရက်များနှင့် အားလပ်ရက်များမှလွဲ၍ သင့်တောင်းဆိုမှုကို အလုပ်ချိန် 24 နာရီအတွင်း တုံ့ပြန်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးစားပါမည်။ သင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကို တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
တနင်္လာ-သောကြာ 8:00am-12:00pm, 13:00pm-5:00pm (Taiwan) View
GISON MACHINERY CO., LTD. ပိုကြီးတဲ့မြေပုံတစ်ခုထဲမှာ
GISONစက်ယန္တရား Co.,Ltd. ထိုင်ဝမ်တွင်
Air Tools၊ Pneumatic Tools များအတွက် 48 နှစ်ကျော် ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံရှိသော ထိုင်ဝမ်။